Uyiphucula njani ukusebenza kwayo Windows 10 | Iindaba zeGajethi
Ungayiphucula njani Windows 10 ukusebenza
Akukho nkqubo yokusebenza igqibeleleyo, akukho. Ngamnye kubo, nokuba yi-macOS, i-iOS, i-Android, iLinux distro okanye nayiphi na into, ngamnye kubo unengxaki efanayo yokhuseleko kunye nozinzo. Esona sisombululo sikhawulezayo sokusombulula ingxaki kukufaka inkqubo yokusebenza ukusuka ekuqaleni.
Ukuthintela ukufikelela kuloo ndawo, abanye abasebenzisi abanokuthi bayithathe njengengxaki ngenxa yako konke oko kubandakanya ukwenza ikopi yogcino lwedatha yonke, kweli nqaku siza kukubonisa amaqhinga ahlukeneyo ukunqanda oko ekuhambeni kwexesha Windows 10 ukusebenza ayinguwe lo usinike wona ekuqaleni.
Ukuba ufikelele kweli nqaku, kunokwenzeka ukuba iqela lakho ayikho kanye le nto kuthiwa intsha, kwaye mhlawumbi ufake Windows 10 emva kokuba ugqithile kwiWindows 7, ngakumbi ngoku xa iphelile inkxaso esemthethweni. Ukuba ulandela amaqhinga esikubonisa apha ngezantsi, uya kubona indlela ukusebenza kwakho Windows 10 ikhompyuter iphucula kakhulu.
Amaqhinga esikubonisa wona apha ngezantsi zilungile xa sisandula ukufaka iWindows 10 kwaye asikaqali ukufaka iiapps okwangoku. Ukuba ayisiyiyo imeko yakho, uphuculo onokulufumana lunokuba lincinci kwaye lungabi lukhulu ngokungathi uyenzile nge Windows 10 ufake nje.
Uyifaka njani iWindows 10 ukusuka kwi-USB
1 Phucula ukusebenza kweWindows 10
1.1 Vala oopopayi kunye nokukhanya
1.2 Khubaza isalathiso sefayile
1.3 Ukuphonononga iinkqubo ezisebenza xa kuqala ikhompyuter
1.4 Faka usetyenziso olufanelekileyo / ucime ezo singazisebenzisi
1.5 Vala usetyenziso esingazisebenzisiyo
1.6 Cima iifayile ezingafunekiyo
1.7 Yenza isaphulelo kwi-hard drive yakho
2 Ukuba kunjalo, ikhompyuter isacotha ...
2.1 Yandisa i-RAM
2.2 Beka i-SSD ebomini bakho, uyakuyixabisa
Phucula ukusebenza kweWindows 10
Vala oopopayi kunye nokukhanya
Iinkqubo zokusebenza kungekuphela ngena ngamehlo, kodwa ngokusebenza kwayo, nangona kunjalo, baninzi abasebenzisi abakhetha i-aesthetics kunokusebenza. Ngale ndlela, Windows 10 ibeka kuthi inani elikhulu lezinto ezibonakalayo ukuze sikwazi ukungena ngamehlo, ngohlobo lweempiliso kunye nezinto ezibonakalayo.
Ingxaki ngeekhompyuter ezindala okanye ezingenabuchule kukuba iprosesa kunye nemizobo yokusetyenziswa kakhulu Ngawo onke amaxesha, ke amava kunye namava omsebenzisi awasathandeki kumsebenzisi, kuba awaboneleli ngobumdaka obulindelwe ngumntu.
Ukuba sifuna ukuphucula ubumdaka benkqubo kufuneka sizenze zingasebenzi kwimenyu ye- Useto> Ukufikeleleka> Umboniso> Yenza lula kwaye wenze ngokwezifiso iiWindows. Ukuzenza zingasebenzi, kufuneka nje ukuba siziqwalasele iitshintshi ezihambelana neeVenkile zeWindows kwaye zibonise ukuvela kwiWindows.
Khubaza isalathiso sefayile
Ngalo lonke ixesha ufaka Windows 10 ukusuka ekuqaleni, uya kubona ukuba ngeentsuku zokuqala, ikhompyuter yakho iyaqhubeka ukufunda idiski enzima. Into eyenziwa yikhompyuter yakho kukukhomba amaxwebhu onawo kwikhompyuter yakho, ukuze xa uwakhangela, akufuneki uskene ikhompyuter yakho ngokuzikhangela, umsebenzi onokuthatha imizuzu eliqela ukuba inani leefayile likhulu phezulu.
Ukuba ungumsebenzisi onocwangco kwaye ugcina amaxwebhu akho ngendlela ngendlela kwikhompyuter yakho, unokukhubaza isalathiso sefayile Kwaye uphephe ukuba iqela lakho, amaxesha ngamaxesha, lichithe imizuzu eliqela lisenza irekhodi yeefayile ozigcine kwikhompyuter yakho.
Ukukhubaza isalathiso sefayile, kufuneka uchwetheze kwibhokisi yokukhangela services.msc kwaye ucinezela u-Enter. Kwifestile eboniswe ngezantsi, kufuneka sijonge ukhetho Usesho lweWindows. Cofa kabini ukubonisa ukhetho kwaye ukhethe uhlobo lesiqalo Khubazekile.
Ukuphonononga iinkqubo ezisebenza xa kuqala ikhompyuter
Ezinye izicelo kufuneka ziqhutywe rhoqo xa siqala ikhompyutha yethu. Ezi zicelo, kwiimeko ezininzi, ziyimfuneko kwizixhobo zangaphandle ukuze zisebenze xa sizidibanisa nekhompyuter nangaliphi na ixesha, njalo Akucetyiswa ukuba uzisuse kuqaliso lweWindows.
Nangona kunjalo, kukho ezinye izicelo xa zifakiwe, zongezwa kwisiqalo seWindows ngaphandle kwemvume yethu yokuqalisa ngokukhawuleza xa sifuna ukuyiqhuba, nto leyo ebangela ixesha lokuqalisa kwezixhobo zethu lenyuke kakhulu, iba yimizuzu eliqela de idiski enzima iyeke ukufunda kwaye ilungele ukulandela imiyalelo yethu.
Kule meko, eyona nto sinokuyenza kukususa kuqaliso lweWindows. Izicelo ezinje ngeSpotify kunye neChannel, yimizekelo emibini ecacileyo yezicelo ezinolu lonwabo, izicelo ezo Bangasemva nanini na siqala iqela lethu lisebenzisa izixhobo nangona singazukuzisebenzisa. Kwimeko yokusetyenziswa kwe-antivirus, ukwenziwa kwayo ekuqaleni kwekhompyuter yethu kufanelekile ngokupheleleyo.
Ukucima usetyenziso kwasekuqaleni kwikhompyuter yethu kulula njengokufikelela kumphathi womsebenzi ngomyalelo weCtrl + Alt + Del. umphathi womsebenzi, siya kwiKhaya thebhu, khetha imouse usetyenziso esifuna ukulwenza kwaye ucofe kwiqhosha lasekunene.
Faka usetyenziso olufanelekileyo / ucime ezo singazisebenzisi
Eyona nto imbi esinokuyenza kwikhompyuter yethu kukufaka usetyenziso ngaphandle kwemvano-siphelo okanye isizathu, ngaphandle komyalelo okanye ikonsathi, ngenxa nje satiate ukwazi kwabantu malunga nokusebenziseka okunokwenzeka kwesicelo. Zonke izicelo esizifakayo ziguqula irejista yeWindows ukuze usetyenziso lusebenze ngokuchanekileyo.
Ingxaki ifunyenwe ngokuhamba kwexesha, xa inani lezicelo liphezulu kakhulu kangangokuba iqela liyaphambana likhangela izingqinisiso ezininzi kwizicelo esingazisebenzisiyo. Ukongeza, sinjalo ukuthatha indawo exabisekileyo kwi-hard drive yethu esinokuzisebenzisa kwezinye iinjongo.
Ukukhupha usetyenziso, kufuneka singene kwifayile Useto lweWindows, ii-aplikeshini> Izicelo kunye neempawu. Emva koko, kufuneka sikhethe ukuba yeyiphi na inkqubo esifuna ukuyicima kwaye ucofe kwiqhosha elihambelanayo.
Vala usetyenziso esingazisebenzisiyo
Ukuba sele siyekile ukusebenzisa isicelo kwaye asizicwangcisi ukusisebenzisa kwakhona, eyona nto sinokuyenza kukuyivala, ukuze sikhulule sobabini inkumbulo yezixhobo zethu kunye nezixhobo. Akuncedi nganto ukugcina isicelo sivulekile ukuba sele siyekile ukusebenza ngaso.
Ngale nto, asizukukwenza ukuba iqela lethu lisebenze ngendlela enamanzi ngakumbi, kodwa siya kwenza njalo vumela ikhomputha ukuba isebenzise imemori engaphantsi. Imemori ebonakalayo yindawo yediski enzima esetyenziswa yikhompyuter xa siphelelwe yi-RAM.
Cima iifayile ezingafunekiyo
Nje ukuba ufike kuhambo okanye usuka kumsitho apho i-smartphone yakho ibingomnye wabalinganiswa abaphambili bokungafi msitho, ukhuphele umxholo kwikhompyuter yakho ukuze wabelane ngawo nabahlobo bakho okanye nosapho. Ukuza kuthi ga ngoku yonke into ichanekile. Kodwa wakuba wabelana ngomxholo akukho sidingo sokugcina loo mifanekiso okanye ividiyo kwihard drive. Akukho nanye.
Xa loo mifanekiso okanye iividiyo zifezekisile loo msebenzi, kufuneka uhambisa olo lwazi kwi-hard drive yangaphandle, ayisiyokukhulula indawo kwi-hard drive yethu kuphela, kodwa nokuthintela ukuphulukana nayo kwimeko apho izixhobo zethu ziyeke ukusebenza ngaso nasiphi na isizathu kwaye kunyanzelekile ukuba siyifomathe.
Yenza isaphulelo kwi-hard drive yakho
Kude kukhululwe Windows 10, zonke iinguqulelo zangaphambili zifuna ukuba sihlaziye rhoqo i-hard drive yethu, oko kukuthi, beka idatha kwakhona ngendlela elungeleleneyo kwidiski yethu ukuze zisoloko zisondelelene kangangoko kwaye iqela lithatha ixesha elincinci ukuzifikelela.
Ngokufika Windows 10, akuyomfuneko ukuyenza rhoqo, kuba kunjalo iqela ngokwalo elijongene nalo ngokwenkqubo. Nangona kunjalo, kubalulekile ukwenza njalo xa sikhulule indawo enkulu kwaye sifuna ikhompyuter yethu ukuba iqhubeke kakuhle ngaphandle kokulinda iWindows ukuba iyenze veki nganye njengoko icwangcisiwe ngokwendabuko.
Ukuqhuba okuQinisekisiweyo (SSD) akufuneki ukuba uhlazeke okoko ugcino lwenziwe ngokwamanani kwaye hayi ngoomatshini njengemishini yokuqhuba kanzima (i-HDD). Ukufikelela kwisicelo sokuThintelwa Windows 10, kufuneka sichwetheze kwibhokisi yokukhangela yaseCortana kwaye ukhethe iziphumo Ukwehla nokwandisa ukuqhuba. Ukuqala ukonakaliswa kwezinto kufuneka nje ucofe kuKwandisa.
Ukuba kunjalo, ikhompyuter isacotha ...
Asinguye wonke umntu onayo izixhobo zemali ukutshintsha izixhobo yeyangoku. Ngethamsanqa, makhe sithethe malunga nelaptop okanye ikhompyuter yedesktop, sinokutyala ii-euro ezimbalwa ukwandisa ezinye iinkcukacha zezixhobo zethu kwaye siya kuthi siphumelele ngokutsiba okukhulu ekusebenzeni.
Eyona RAM ilunge ngakumbi. Imemori ye-RAM akufuneki ibhidaniswe nendawo yokugcina. I-RAM (iMemori yokuFikelela ngokungaRandiyo) sisigcini esisetyenziswa yikhompyuter ukuqhuba usetyenziso kwikhompyuter, ukugcinwa okususwe ngokupheleleyo xa icinyiwe ikhompyuter.
Ihard drive, yindawo yokugcina iqela lethu kufuneka lifake izicelo. Eso sithuba asisoze sasuswa xa sicima izixhobo, siyacinywa kuphela xa sisenza ngesandla. Nje ukuba sicace gca malunga nalo mbandela abantu abaninzi ababhidayo, siyaqhubeka.
Uninzi lweekhompyuter ezindala zixhotyiswe nge-4 GB ye-RAM, inkumbulo yokuba kwiminyaka embalwa edlulileyo ibingaphezulu ngokwaneleyo. Nangona kunjalo, zombini iinkqubo kunye neenkqubo zokusebenza, zihamba ngokutyibilikayo kwaye zikhawuleza xa zine-RAM eninzi. Kule meko, sinokwandisa i-RAM yezixhobo zethu ukuya kuthi ga kwi-8 GB, ubuncinci, ngee-euro ezimbalwa kakhulu.
Beka i-SSD ebomini bakho, uyakuyixabisa
Imitshini enzima yokuqhuba (i-HDD) isinika isantya sokufunda esicothayo kune-hard drive (SSD). Umahluko wokuqala ikhompyuter ukusuka ekuqaleni usebenzisa i-HDD kwi-SSD ingathatha imizuzu eliqela.
Kwiminyaka yakutshanje, ixabiso lee-SSD lihle kakhulu kwaye malunga nee-euro ezingama-30 sinokufumana i-256 GB SSD. Ukuba eso sithuba kubonakala ngathi asonelanga, unokukhetha isixa esikhulu sokugcina, kodwa ixabiso layo liphezulu.
Olunye ukhetho kukugcina iHDD yoomatshini yezixhobo zakho ukugcina ulwazi olufana neefoto, iividiyo kunye namaxwebhu ahlukeneyo kunye Sebenzisa i-SSD ukufaka iiWindows kunye nazo zonke usetyenziso Ukuba sisebenza kwikhompyuter yethu, ngale ndlela ayizukuncitshiswa kuphela ixesha lokuqalisa kwikhompyuter yethu, kodwa kwanolo lwezicelo esiziqhubayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Tutorials » Ungayiphucula njani Windows 10 ukusebenza
Ungayenza njani inkqubo emnyama kwi-WhatsApp
Yintoni esinokuyenza ukuba i-smartphone yethu ye-Android okanye ye-iOS ibiwe okanye ilahlekile? Amanyathelo esikucebisa ukuba uwalandele